The ahịa uru na atụmanya nke KOOWHEEL hoverboard K8 - Jomo Technology Co., Ltd
The ahịa uru na atụmanya nke KOOWHEEL hoverboard K8
1. The development ọnọdụ nke onwe guzozie skuuta
2. Nọgide Na-enwe ahịa nke itule ụgbọ ala.
3. K8 ahịa uru na olileanya
Na-adịbeghị anya, na upgrading nke oriri, ọhụrụ ume ugbo ala - itule ụgbọala na-hụrụ n'anya site anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na-eji ọkụ maka ya gburugburu ebe obibi-echebe, akụ na ụba na-adaba adaba atụmatụ, na-eji ọkụ na-erite uru site na upgrading nke njem ina, esenidụt ahịa buru nnọọ ibu, mmepe atụmanya na-atụ anya. Si zuru ụwa ọnụ ọhụrụ ume ụgbọala ụlọ ọrụ, na ezi ụgbọ ala, smart ụgbọ ala ga-aghọ mainstream nke ga-eme n'ọdịnihu. China bụ mba kasị mmepụta na mbupụ nke electric onwe guzozie skuuta n'ụwa, aza ajụjụ maka 90% nke Global Balance skuuta ụlọ ọrụ. Otú ọ dị, n'ihi na enweghị nke mkpa anụ ụlọ ụkpụrụ na ụkpụrụ, electric skuuta emeputangwaahịa imewe na n'ichepụta usoro enweghị ọkọlọtọ nduzi, enweghị na-elekọta, na-akpata ngwaahịa mma na-ekwe nkwa, ahịa dị ka ụyọkọ, na copycat, ndị ahịa na-idei mmiri na adịgboroja na mma na ngwaahịa, na-eji ọkụ na-apụghị ịmata àgwà nke ngwaahịa. The ziri ezi ikike na ọdịmma na-ekwe nkwa, Product si nchekwa ize ndụ nwere a mbara akasiaha ke afo gara aga, mee ka nnukwu weere na eji ọkụ, na kpọrọ-egbochi ndị electric itule skuuta si ebupụ.
Ịlanahụ nke ike kwere dịrị, ezi mma ịnọgide na-enwe ahụ ike mmepe nke itule ụgbọ ala
The ụlọ ọrụ kwesịrị ulo oru na-emepụta àgwà ngwaahịa, na ọrụ dị mkpa ulo oru na ike inye nche. N'ihi na itule ụgbọ ala ụlọ ọrụ na-ka na-eche ihu ihe isi ike, ụlọ ọrụ mkpa iji lebara ụlọ ọrụ mkpa, onwe-echiche na-achọ mgbanwe na ihe itunanya, na ngwaahịa mma dị ka ndị mbụ, redefine ụlọ ọrụ iwu, na jikotara aka wee mepụta a mma gburugburu ebe obibi maka ahịa mpi na ụlọ ọrụ n'okpuru ike nchekwa ụkpụrụ. Na echiche nke kacha ekpo ọkụ ugbu 6.5 inch ot onwe adịzi skuuta na ere na itule ụgbọ ala ahịa. Na otu aka, na ụlọ ọrụ ọnụ ọgụgụ kọwakwuru ngwa ngwa, ma n'aka nke ọzọ, ọ bụ mgbagwoju anya mpi. "A onye n'ime ọmụmụ na-egosipụta na onye nta akụkọ. N'ihi na enweghị ụkpụrụ, ụfọdụ electric itule skuuta emepụta iji usụhọde mmiri, abụọ nzukọ nakwa ụzọ ndị ọzọ iji belata-akwụ ụgwọ, ọ bụghị ikwubiga okwu ókè ịsị, a na ajọ mpi nwere ike ime ka dum ụlọ ọrụ ngwa ngwa laghachi efu, nke a otu narị ijeri yuan , ahịa size nke itule ụgbọ ala na ụlọ ọrụ ga-eche ihu ize ndụ ka ukwuu.
Olee otú iji kpochapụ pests na ndị a na ụlọ ọrụ ma na-enwe nguzo dị mma ụgbọ ala ụlọ ahụ ike, anyị KOOWHEEL technology si dị guzobere iji na ugbu a ka e n'ịgbaso àgwà na nchekwa mbụ, iji nweta efu mberede, inye nche maka nchekwa nke na-eji ọkụ. Olee otú mpi a 6.5 inch usụhọde hoverboar na ahịa, nlanarị nke ike kwere dịrị itoolu esemokwu anyị agaghịkwa na-atụ anya ot 6.5 inch ụdị, ma na oke nke njikarịcha na ọhụrụ, na-enye na-eji ọkụ a ọhụrụ imewe 6.5 inch K8 electric itule skuuta izute ahịa ina ọ ga-enwe elu na-eri na-eji dochie ot 6.5 inch E nweghị ihe yiri ihe mere eme.
K8 ahịa uru na olileanya
1. onwe nlereanya ngwaahịa.
E site Italy Milan, oyi ma na pụrụ iche anya, pụrụ iche Ọdịdị ụkpụrụ, nnwapụta European na American na-azụ. Ịhapụ ochie n'ile na-agbaji mgbochi nke patent ịda iwu
2. PCB Taotao sọrọ usoro
Kuchiri sọrọ usoro motherboard si Taotao sayensị na nkà na ụzụ na ụlọ ọrụ. E jiri ya tụnyere ahịa ọnụ ala ika-aha otu usoro motherboard, Taotao nwere mma kwụsie ike nke sọrọ usoro, bụ eme ka nchebe nke nchedo nke ndị ọrụ.
Taotao Tech: 1, PC, isi, osisi, na, 2pcs, gyroscopes.
Mbụ na klas quality moto na Hong Hong Motors nwere uru nke àgwà nkwa, ezigbo ịnya na dịghị mkpọtụ.
Power ụdị batrị mkpọ, ogologo ndụ. Koowheel K8 eji 14 ike-azọpụta isi 24V anụ ụlọ batrị a ike batrị Ukwu, ogologo ndụ na ọkụ nchedo, a nwaleworo, na-agba ọsọ dị anya karịa ahịa ogbo 36V itule skuuta, nnukwu ike!
The batrị mkpọ ka nke fireproof ihe onwunwe, na ọ bụ odi mfe karịa na juu ngwugwu ji site ọrụ ibe
5. Hand ụdọ
Na a nko ụdị obere eriri, ọ nwere ike ibutu, mara mma na-adaba adaba, na ike-alụkwa, jiri ya tụnyere ihe ot 6.5 inch ziri ezi ụgbọala. Ọ bụ mfe na-ebu na-enweghị Akpa
6. price uru
Post oge: Aug-15-2017